Chilstral warshadeed oo xirfadle ah oo laser ah, wax soo saarkii qaboojiyaha biyaha |S&A Qaboo yar
Kontoroolka heerkulka ee saxda ah ee nidaamyada laser iyo codsiyada warshadaha ilaa 2002
Laser laser chiller
Ultrafity Laser & UV Laser Chiller
Nidaamka warshadaha ee Chiller
Biyuhu way qaboojiyeen chiller
S&A Qaboo yar
Qaboojinta qaboojinta warshadaha iyo xakameynta heerkulka
20 sano khibrad u leh qaboojinta wax ku oolka ah
S&A Chilller waxaa la aasaasay 2002 oo leh 20 sano waayo-aragnimo wax soo saar Chillle, waxaana hadda loo aqoonsaday inuu yahay tikniyoolajiyadda teknolojiyadda qaboojinta iyo la-xirta ee warshadaha lassalka. S&A Chilller wuxuu u bandhigayaa waxa ay balan qaadaynayso - bixinta waxqabadka sare, si aad ah loogu kalsoonaan karo oo tamar koronto oo hufan oo leh tayo sare oo leh tayo sare leh.
Biyahayaga dib-u-soo-celintu waxay ku habboon yihiin codsiyo badan oo warshadeed oo kala duwan. Iyo codsiyada laser gaar ahaan, waxaan horumarinaa xariiq dhammaystiran oo ahLaser Biyaha Chilf-ka, oo u dhexeeya Unugga Isu-taagan ee Stree-Kaliya ilaa Ruck Bross cutubka, oo laga soo bilaabo awood hooseeya ilaa taxanaha awoodda sare, laga bilaabo ± 1 ℃ ilaa ± 0.1 ℃ Farsamada xasilloonida.
Waxaan ka caawinnay macaamiisha in kabadan 50 dal si ay u xalliyaan dhibaatooyinka kululaynta ee mashiinadooda iyagoo ka go'nayaasheena joogtada ah ee tayada wax soosaarka ee xasilloon, hal-abuurnimada joogtada ah iyo fahamka baahiyaha macaamiisha ......
Alaabada la soo saaray
S&A Chilller wuxuu u bandhigayaa waxa ay balan qaadaynayso - bixinta waxqabadka sare, si aad ah loogu kalsoonaan karo oo tamar koronto oo hufan oo leh tayo sare oo leh tayo sare leh.
Nidaamka Chiller Warshadaha CW-6000 3KW MARKA KHATARTA 5 ilaa 35 ° C heerkulnimada
Dhigeysa Mount Chiller RMFL-1000 1000W Xararad Laser Alxanka Machine
Biyaha qandaca Chiller CW-6210 Deggan Operation ± 0.5 ° C qiray qaboojinta
Child Warshadaha CL-5000
Biyaha la qaadan karo ee la qaadan karo cwap-20 loogu talagalay Ultrafist Laser iyo UV Laser ± 0.1 ℃ xasilloonida rs485
Unugga qaboojiyaha awooda ee ballaaran ee warshadaha ee ah CWFL-12000 oo loogu talagalay 12KW Laser
Inuu noqdo hogaamiyaha qalabka qaboojinta ee warshadaha caalamiga ah ee caalamiga ah
Waxaan ku qabannaa wax ka badan kaliya iibinta sheyga
Waxaan bixinaa 24/7 taageerada macaamiisha oo aan ka taxadiri karno baahi kasta baahi kasta oo macaamiisha ah ayagoo siinaya talo bixinno dayactir oo waxtar leh, hagaha qalliinka iyo talooyinka toogashada iyo caleenta dhibaatada haddii cilladdu dhacdo. Iyo macaamiisha kormeerka, waxay filan karaan adeegga maxalliga ah ee Ruushka, UK, Poland, Mexico, Australiya, Singapore, Hindiya, Hindiya iyo Taiwan.
Kasta S&A Chillr Waxaan si fiican u gaarsiinaynaa macaamiisheena si fiican ugama xirxiran karaan agabyada waarta oo ka ilaalin kara jahwareerka qoyaanka iyo boodhka inta lagu guda jiro in ay joogaan xaalado iyo xaalado kaamil ah markii ay timaado meelaha macaamiisha.
Maxaad u dooratay
S&A Chilller waxaa la aasaasay 2002 oo leh 20 sano waayo-aragnimo wax soo saar Chillle, waxaana hadda loo aqoonsaday inuu yahay tikniyoolajiyadda teknolojiyadda qaboojinta iyo la-xirta ee warshadaha lassalka.
20 sano oo waayo-aragnimo ah
Laga soo bilaabo 2002, S&A Chiller ayaa loo hibeeyay cutubyo qabow oo warshadeed iyo u adeegaya warshado badan oo kala duwan, gaar ahaan warshadaha laser. Khibradeena qaboojinta saxda ah waxay noo oggolaaneysaa inaan ogaano waxaad u baahan tahay iyo caqabadda qabow ee aad wajahayso. Laga soo bilaabo ± 1 ℃ ilaa ± 0.1 ℃ xasilloonida, waxaad had iyo jeer halkan ka heli kartaa biyo qabow ku habboon hanaankaaga.
Faa'iido soo saarka
Si loo soo saaro xargaha biyaha ee tayada ugu fiican, waxaan soo bandhignay khadka wax soo saarka ee sare ee saldhigga wax soo saarka 18000m2 ah oo aan u dhisnay laan si gaar ah birta ugu sareeya ee birta, compress& Consernesers kuwaas oo ah qaybaha aasaasiga ah ee qaboojiyaha biyaha. Awoodda wax soo saarka ee sanadlaha ah ayaa hadda gaadhaysa 100,000+ cutub sanadkii.
Xakamaynta tayada adag ee adag
Tayada ayaa ah ahmiyadeena ugu sareysa oo waxay qaadataa inta lagu gudajiro dhammaan wejiyada wax soo saarka oo dhan, marka laga soo iibsado alaabta ceeriin ah ee gaarsiinta dhaxalka. Mid kasta oo ka mid ah qaboojiyadeena waxaa lagu tijaabiyaa shaybaarka hoostiisa xaalado culus oo la barbardhigo oo ay la jaan qaadayaan CE, ROHS oo gaaro heerar leh 2 sano oo damaanad ah.
Had iyo jeer waannu kuu joognaa
Kooxdayada xirfadda leh marwalba waxay joogtaa adeeggaaga markasta oo aad u baahatid macluumaad ama caawinaad xirfadeed oo ku saabsan chiller warshadaha. Xitaa waxaan diyaarinayno dhibco adeegyo Ruushka, UK, Poland, Mexico, Australiya, Singapore, Hindiya, Hinland iyo Taiwan si ay u siiyaan adeeg dhakhso leh macaamiisha orgada.
Waxa ay macaamiisheena dhahaan
S&A Chiller wuxuu sameeyaa qaar ka mid ah alaabada wanaagsan, adeegsi weyn oo loogu talagalay qaboojinta lasers ama xitaa codsiyo u gaar ah sida haynta isku-dhafka ah ee ku-meel-gaarka ah.
- by u.s. macmiilka
Waan adeegsadayS&A Chills oo loogu talagalay laba ka mid ah mashaariicdeyda muraayadaha indhaha ee leysar-ka oo ay qabanayaan shaqo weyn. Su'aalahana dhaqso si dhakhso leh ayey uga jawaabaan.
- Macmiilka Australiyaanka ah
Kaliya ka tag e-maylkaaga ama lambarka taleefanka foomka xiriirka si aan ku siin karno adeegyo badan!
Tel: + 86-89301885
Fakis: + 86-20-84309967
Xuquuqda daabacaadda © 2021 S&A Chillle - Dhamaan xuquuqaha ayaa ilaaliya.